Igbo, John: Lesson 041 - Jizos wepu onwe ya n'olu di n'isi ya (Jọn 6:14-15) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 041 (Jesus withdraws from the clamor for his crowning; Jesus comes to his disciples in distress)
2. Jizos wepu onwe ya n'olu di n'isi ya (Jọn 6:14-15)
14 Ya mere ndi-Ju huru ihe-iriba-ama nke Jisus mere, ha si, N'ezie Onye a bu Onye-amuma ahu Nke nābia nime uwa. 15 Ya mere Jisus, ebe ha matara na ha gaje ibia, were ya, ime Ya eze, ọ laghachiri n'ugwu ahụ n'onwe ya.
Jizọs bịara n'ụwa iji merie ihe a kpọrọ mmadụ. Mgbe o richara puku mmadụ ise, ndị mmadụ gbakọrọ ya ọkụ n'obi. Ha na-akụ ma na-egwu egwu ka ha na-asọpụrụ ya dị ka eze. Ha ghọtara na onye Galili a bụ onye Chineke; Olu Chineke kwuru site n'aka ya, ike nke Onye kachasị ihe nile elu wee dị elu n'ime ya. Omume rubeere ya isi. O nyere ha nri dika Moses mere n'ala ịkpa. Ọ bụ onye amụma ahụ e kwere ná nkwa ka o duru otu mba e ledara anya na eziokwu (Deuterọnọmi 18:15). Ha chekwara na ọ bụrụ na Jizọs ghọrọ eze ha, ha agaghị arụ ọrụ ma ọ bụ ike ọgwụgwụ n'ọdịnihu. "Anyị ga-enwe oge iji mụọ Akwụkwọ Nsọ ma kpee ekpere, ọ ga-enyekwa anyị nri n'egbughị oge, eze dị otú a ga-adị ike nke ukwuu iji merie ndị agha Rom, ọ pụdịrị iwedata ọkụ sitere n'eluigwe nke ga-erepịa ha. kpọsa ya eze. " Ha niile dị ka onye bịakwutere ya ka ha buru ya n'ubu ha. Ha ga-akwado ya n'olileanya na ọ ga-akwado ha na ihe oriri dị mkpa.
Gịnị bụ nguzo Jisọs kwadoro usoro a na-ewu ewu? Ọ ṅụrịrị ọṅụ ma kelee ha n'ihi na ha tụkwasịrị ya obi? Ndi enye ayak idem ọnọ ọnwụnwa na-ewu Alaeze ya na-enyemaka nke na-ekweghị ekwe ma ọ bụ otú o ichughachiazu atụmatụ ha? Ee e, okwughị okwu o bula, kama ọ lara n'ala ịkpa. O choghi ka ndi mmadu buru ya; ọ na-enwe afọ ojuju maka Chineke ịkwado ya. Jizọs maara ọnọdụ nke ndị a obi ụtọ; N'ịbụ ndị mmanya na-egbu egbu na ha enweghị ike ige ntị na ndụmọdụ ya. Nke a bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị jikọtara ọnụ n'otu echiche.
Jizos enwegh ike icho ala eze elu ala, kama kama idu ndi mmadu n'otu n'otu ka ha chegharia na nmalite. Odighi onye piribà n'Alaeze maob ghi site n'zo nke abo. Ìgwè mmadụ ahụ aghọtaghị ebumnuche nke ọrụ ebube na ihe ịrịba ama. Ha chere maka achicha nke uwa; o kwuru banyere Mmụọ Nsọ iji gboo agụụ miri emi. Ha bu ochichi nke uwa na ebube n'ebube; ọ họọrọ obe dị ka ihe ndabere nke Alaeze ya. Enweghị nchegharị na ọmụmụ nke abụọ ị gaghị enwe ike ịnakwere Kraịst.
Jizos ekwesighi nsoputa nke ìgwè mmad. O kwenyeghị otuto ụmụ mmadụ, ma gee ntị n'olu Nna ya. Ọ na-emechi obi ya ọnwụnwa Setan. O wezugara n'ekpere, ikele Nna ya ma kpee ka mmụọ nke ndị ìsì meghee anya. Okwenyeghi ka ndi mmadu kpuchie ya, ebe ha matara na ha ga-eti mkpu 'Hosanna' ubochi, ma 'kpogide ya n'obe'. Kraist maara obi anyi, adighi eduhie ya.
3. Jizọs na-abịakwute ndị na-eso ụzọ ya ná nsogbu (Jọn 6:16-21)
16 Mgbe o ruru ná mgbede, ndị na-eso ụzọ ya gbadara n'oké osimiri, 17 ha wee banye n'ụgbọ mmiri ma gafee oké osimiri gaa Kapaniọm. Ọ bụ ugbu a ọchịchịrị, Jizọs abịaghị ha. Nnukwu ifufe na-efesi ike n'oké osimiri ahụ. Ha we hu Jisus ka Ọ nējeghari n'elu oké osimiri, nābiaru kwa ub͕ọ-ala ahu nso; ha we tua egwu. 20 Ma ọ sịrị ha: "Ọ bụ m. Unu atụla egwu." 21 Ya mere, ha dị njikere ịnabata ya n'ụgbọ mmiri. Ozugbo ụgbọ mmiri ahụ nọ n'ala ha na-aga.
Mgbe Jizos nọ n 'ebe di elu nke Golan, o huru ebe di anya site na ndi neso uzo ya ka ike gwuru ha ka ha nagba oso. Ka abalị na-eru nso, ọ gakwuuru ha ka ha jiri ụkwụ gafee ebili mmiri nke ọdọ mmiri ahụ. Ọ hapụghị ha ka ha chee ihu n'ihe ize ndụ, ma ha na-ama ya ụra ma nwee ụjọ. Mgbe ụfọdụ, ndị na-azụ azụ na-eche na ha na-ahụ ọhụụ ebe ọ bụ na ha na-etinye oge dị ukwuu n'abalị n'elu mmiri. Jizos biara wee kwue okwu n'onodi n'obi, "Mu onwem bu." Okwu a ghọrọ ntọala nke okwukwe ndịozi. Anyị na-achọta na Agba Ochie bụ ihe yiri "MỤ" iji gosipụta ọnụnọ Onyenwe anyị na ndị kwere ekwe. Ndị na-eso ụzọ ahụ ghọtara na Jizọs nwere ikike niile n'elu ihe ndị ahụ; nri a na-eme n'ọtụtụ aka ya, ebili mmiri ahụ na-eburu ya elu, oké mmiri ozuzo ahụ mebiri. N'ịbụ ndị na-achọpụta nke a, ha ka na-atụ egwu karị. N'ihi ya, ọ gwara ha ka ha ghara ịtụ egwu. Iwu a, "Ụjọ na-atụghị anya" bụ maka ndị na-eso ụzọ ya n'oge niile, ọ pụtara ugboro 365 na Bible, otu maka ụbọchị ọ bụla n'ime afọ. Ịtụkwasị ọnụnọ Kraịst ga-emeri egwu anyị. Kedu ụdị ọnọdụ gị ma ọ bụ ihe ọbụla dị njọ, Jizọs sịrị, "Ọ bụ m, atụla ụjọ."
Mgbe ndị na-eso ụzọ ghọtara na ọ tụrụ ha n'anya ma kpọbata ya n'ụgbọ mmiri ahụ. Ozugbo ha ruru n'ikpere mmiri. Nke a bụ akụkụ nke atọ nke ọrụ ebube n'otu ụbọchị ahụ. Jizọs bụ Onyenwe nke Space na Oge ma nwee ike iduga arịa nke Chọọchị n'etiti oké ifufe na ebili mmiri na njem ya. Ọ hụrụ ndị na-eso ụzọ ya n'anya ma na-abịakwute ha ma na-achọ ntụkwasị obi zuru oke n'onwe ya. Ọ na-ewusi obi ike ha n'ebe ọ nọ n'etiti ọchịchịrị na ọnwụnwa ka e wee wepụ ụjọ ma na-arapara n'ahụ ya mgbe niile.
N'ihi gịnị ka Jizọs ji jụ ịbụ eze eze n'ocheeze?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:03 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)